उस्को र उन्को प्रेम कथा - LiveMandu
जबजब लभबभको कुरा आँउछ नि ? मलाई ठूलठूला मान्छेहरु संग रिस उठ्दछ । जस्तै कि पाल्पाको रानीमहल बनाउने खड्ग शम्सेर जबरा, ताजमहल बनाउने शहेनशाह अनि अरु थुप्रै जस्ले मायाको नाममा यति ठूलाठूला कुराहरु बनाइदिए कि अहिले आएर म जस्तो सामान्य प्रेमी या संभावित सामान्य प्रेमीलाई निकै अफ्ठेरो पारेको छ । म न ताजमहल बनाउँन सक्छु न त रानीमहल ? तर त्यो भन्दैमा मैले गर्ने माया कम र रानीमहल र ताजमहल बनाउनेको माया धेरै भन्ने पनि त हैन ? यो माया देखाउने तौरतरिकामा मायाका आधारहरु धेरै आधारित हुने भएकाले होला म सदैव असफल प्रेमी भइरहें अनि सैयौं वर्षदेखि शहनशाह र खड्ग शमशेरहरु हिट भइरहे ।
आजको यो कथा मेरै पनि प्रेमकथा हुनसक्दछ र यदि हैन नै भनेपनि कसैको बास्तविक जिवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ , यो कथा उस्को हो र यो कथा उन्को हो । उ र उनी हामी मध्य जो कोही पनि हुनसक्छौँ , हाम्रो समाजमा धेरै उ र उनिहरु छन् र आज सबै उ र उनिप्रति यो कथा समर्पित गर्न चाहन्छु । ति सबै उ र उनीमा जो लावालस्कर लागेर प्रेम गर्ने सूचीमा नामांकृत छन्, आउँनुहोस् लव कथा शुरु गरौं ।
उस्ले पनि प्रेम गर्न त फिलिम हेरेरै सिकेको हो, नाँच्न कहिल्यै जानेन तर फाईट सीन उस्को बेस्ट । उनीलाई आँखा लगाउने अरुहरुलाई तह लगाउन थुप्रै शर्ट अनि गन्जीहरु झगडा गर्दा उस्ले फटाएको छ । । स्कुलमा सर्वत्र शंका थियो उ र उनिको समबन्धको बिषयमा, अलिहेका केटाकेटीले जस्तो डेट जान कहाँ पाँउनु ? स्कुल अगाडिको पाखरको रुखको टोड्कामा लुकाएर राखेको चिठि लुकेर लिन गएको र लेखेर हालेको उ अझै संझिन्छ । अहिले झैं च्याट गर्न सहज र हातहातमा मोबाइल थिएन उस्को पालामा । पहिलो लव लेटर हप्तादिन घोरिँदा घोरिँदा बल्लतल्ल लेखेको थियो उस्ले, डराई डराई सरस्वती पूजाको दिन प्रसादको लाइन बसेर हातमा बुनिँयाको प्याकेटका साथ उनको हातमा उस्ले थमाइदिएको थियो । निकै पछिसम्म उक्तर आएको थिएन । अनुक्तरित प्रेम लगभग स्वीकार गरेकै बराबर हो भन्ने मानेर उ पछाडी हटेन । बिहिबार हाटमा उनि आँउथिन भनेँरै उ पनि जान्थ्यो तर कुनै बातचित, अकंमाल या भेट घाट गर्न हैन केवल देखादेख गर्नकालागी । अरुहरुलाई शनिबार र बिदाकोदिन भनेँपछि खुशीको सिमा हुन्नथियो तर उस्लाई स्कुल लाग्नेदिननै प्यारो थियो, उनिलाई हेर्न पाउथ्यो ।
दुबैजना एउटै स्कुलमा पढ्थे । आधा रङ्ग खुईलिसकेको उस्को साईकल थियो जस्लाई उस्ले बिभिन्न प्रकारले चलाउन सक्थ्यो जस्तै एउटा हात छोडेर, पछाडी बसेर, उभिएर र दुबै हात नि छोडेर चलाँउथ्यो, अलि खुल्ला बाटो पाँउदा । उस्को साईकलको पाईडल सँगसँगै उनीसँगको प्रेम कथा पनि अगाडी बढिरहेको थियो । एकफेरको नयाँ बर्षमा उस्ले उन्लाई बजारमा पाईने हिरोहिरोईनको फोटाभएका पोष्टकार्डमा नयाँ बर्षको शुभकामना अग्रेंजीमा लेखेर पनि दिएको थियो, “ वान ग्लास अफ वाटर टु ग्लास अफ बियर , ओ माई डियर ह्याप्पी निँउ इयर
उनि उस्को जुलियट बन्न सकिनन या भनौँ उ उन्को ज्याक बन्न सकेन र उनिहरुको प्रेमको टाईटनिक त्यसै डुबेर गयो । उ र उस्की उनिको बिछोड भयो, सपना तुहिए । उनीको बिहेको निम्तो उस्को घरमा पनि आएको रहेछ तर उ गएन । बुवा जानुभयो अनि कस्तो धुमधामसँग भएको बिहे भनेँर घरमा सुनाँउनुभएको थियो रे । बिदेशमै बस्ने केटा महिनाको यति कमाँउछ, गएको चार बर्षमा त बाटोछेउको दश कठ्ठा घडेरीपनि किनिदियो रे आमाको नाँउमा, जुन बिदेशीले उस्को माया लग्यो त्यहि बिदेशीको गुनगान पनि उस्ले राम्रैगरि सुनेछ । खुशी त उ पक्कै खुशी होली, मैले भएको भए ६ महिनाको कमाईले पनि एक तोला सुन किनिदिन सक्दिनथिएँ होला बरु ठिकै भयो अहिलेसम्म त बिदेशी रकम कमाउने ले उन्लाई धेरै सुन किनिदिसक्यो होला ? तर फेरि यहाँ मसँगै भएकी भए उनी आफ्नै माटामै हुन्थिन, केहि किन्न नसके पनि माया त गर्थे नि म उन्लाई, के थाहा बिहे गरेर हामी दुबैजनानै बिदेश पो जान्थ्यौँ कि ? संभावनाका यस्ता कुरामा उ अझै अल्झिरहन्छ ।
हरेक पिलेनमा बिदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाईहरु सफा लुगा लाएर, सुटकेश र झोला बोकेर गाँउशहर छिर्छन र खोजी गर्छन एउटा सुशील, सभ्य र मायालु श्रीमती जस्लाई आफैँसँग लिएर जान्छन बिदेश उनिलाईजस्तै , उस्को मुख अमिलो भयो । अनि त्यसपछि उ जस्तै धेरै स्वदेशी रोमियोहरु आधा रङ्ग खुईलिएको साईकल, यादहरु र केहि फाटफुट चिठि पत्रको सहारामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ, गाह्रो छ उस्ले थप्दै गयो । उस्को मुटुले अझै भन्छ कि उनिले उस्लाई नै माया गर्थिन रे, अझैपनि उनीले उस्लाई सम्झेर बिदेशमा धेरै रुन्छिन जस्तो लाग्छ रे उस्लाई ।
उस्को एउटा बिन्ती छ, कृपया ठूला प्लेनमा आएर उ जस्ता साना मान्छेहरुको मायालु खोसेर नलगिदेओ रे ? बिदेश जान्छौँ, उतै कमाँउछौँ, बस्छौँ बरु उतैनै कोही बिदेशी या त्यहाँ भएका स्वदेशी बिहे गरे भईगो नि । यहाँ आएर अर्काको माया खोसेर नलगिदेउ, कृपया । यो संसार गोलो छ, यहाँ धेरै दोबाटाहरु छन् र जिवन लामो छ । एकदिन उस्ले उनलाई त्यस्तै कस्तै दोबाटोमा भेटेर सोध्नेछ रे ? आखिर किन यस्तो गर्यौ भनेँर ? हुन त उन्ले जति नाँईनास्ती गरेपनि मान्नेले मानिदिए पो ? उन्का बुवाआमा आफ्नी एउटैमात्र छोरीलाई बिदेश पठाउन र लाहुरेलाई अन्माएर दिनपाएकोमा बेजोड खुशी थिए रे तर पोहोरको साल उन्कीआमाको पुरानो गानो दुख्ने बेथालाई ओखतीले नि नभेटेर डाक्टरकैमा लगेर चारदिन त सलाईनपानी दिएरै राखेको । अस्पतालमा साह्रै हुनुन्छ भनेँको सुनेपछि उस्की आमालाई पूर्याउन त्यहि साईकलमा उ पनि गएको थियो,छोरीलाई नभेटी मर्नेभएँ भनेँर उस्की हुन नसकेकी सासुआमा रुँदैथिईन । छोरी नजिकै होस भनेँर चिताउनेले किन सात समुन्द्र पठाउनु ? अस्पताल कोठाको दैलोमा बसेर उ सोच्दैथियो । बुढी अलिक बिसेक भएर घरमा आएकी छिन तर बेलाबेला अभर पारिरहन्छ रे । बिहेगरेर गएपछि चारबर्षमा प्रथम पटक उनि आउने रे भन्ने सुनियो एकवर्षको बैशाखमा ।
भावना उर्लेर आएपछि प्रश्न बिनानै जवाफ आउने रहेछ, उ क्रमश प्रश्न बिनाको जवाफ प्रस्तुत गर्दै गयो । आखिर बिदेशका सुकुमार आएपछि हामी गाँउका गुईठे हरुवा चरुवा लाई पर्खिने कोही नहुँदो रहेछ ? खै किन हो बिदेशबाट आएको भनेँपछि सबैजनाको मन पगालिँदोँ रछ प्लस टु को रिजल्टनै नआई उ गई ।
उनि गईन अनि उस्को जिवन शुन्य भयो तर समय त नरोकिने रहेछ । हरेक दिन बिहान सूर्य उनि भएका बेला जस्तै उदाईरह्यो र साँझमा अस्ताईरह्यो, जाडो गर्मी यावत रुपले समय ब्यक्तित भईरह्यो, दशैँ आयो, तिहार आयो केवल उनि आईनन र उस्को मनबाट गईनन् ।
गाँउमै बसेर पनि गरिखाएको छ, उस्ले । डलर साटेजति त कहाँ पाँउनु तर खान पुग्छ । उनी आएपछि उस्ले उनिलाई सम्पर्क गर्न चाहेको पनि छैन उहि एकचोटी फेसबुकमा उनीलाई एड गरेको थियो रे तर उता एसेप्पट भएन रे ?
यहाँधेरै उ हरु उनिको बियोगमा बसेका छन्, धेरै उनिहरु बिदेशबाट आएका तेस्रोपक्षसँग अन्मिएका छन् र यस्ता यस्ता कथाहरु जन्मिएका छन् । कसैको जिवनसँग मेल खान गएमा संयोगमात्र हुनेछ । उनिले के भएर त्यसो गरिन् ? किन उस्लाई छाडिन ? यो कथामा उनीका भावनाहरु समेट्न सकिएको छैन, म लेखक भएका नाताले उनीसँग यो कथाको आधा भाग खोतल्न चाहीरहेको छु, एकदिन उनिसगँ भेट भएपछि या भेटेर म यो कथालाई पूर्ण बनाउने छु , यदि तपाइले उनिलाई ठम्याउन सक्नुभयो भने मलाई खबर गर्नु ल ? आखिर उनी अहिले कस्तो जिवन बाँचिरहेकी छिन ? गाँउभन्दा पर, ठूला शहरमा सुकिली मुकीली भएर के उनिले उस्लाई बिर्सिसकिन कि अझै बिर्सिन बाँकी छ ? । हाम्रो समाजमा मुटु गाँठो पारेका उ जस्ता अनि माया साटेर उडेका उनी जस्ता धेरै पात्रहरु बग्रेल्ती पाइन्छ ।
यता उस्को जिन्दगी कथा र पात्रहरुले भरिएको छ अरे , आजभोली उ मेरो असल साथी भएको छ, दिनै भेट्नेगरेको छु उस्लाई, उस्का कथाहरु अब म लेख्छु । एकदिन फेरि उस्को कथा लिएर एकदिन म आईपुग्छु त्यतिन्जेलसम्म सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला , यो कथा बैकुन्ठै जाला, भन्नेबेलामा शुरुरुरु आइजाला
डण्डीफोर कसरी आउछ? यसको उपचार कसरी गर्ने ?
पाकिस्तानको राष्ट्रिय दिवसमा प्रधानमन्त्रीे मोदीको ट्वीट
सुमितको स्वरमा आमा